म:म कत्तिको खानुहुन्छ ? धेरै खानुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस हुन सक्छ यस्तो…. « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं– अहिले जाडोको मौसम सुरु भएको छ । यो समयमा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु धेरैको खाजाको रोजाई मम हुन सक्छ । हुनपनि मम नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा बनेको छ ।